Home Wararka Dibada Zelenesky: Ukraine waxay weli baadigoobeysaa nidaamka gantaalaha ee MLRS
Zelenesky: Ukraine waxay weli baadigoobeysaa nidaamka gantaalaha ee MLRS
Madaxweynaha Ukraine Volodmyr Zelenesky ayaa Sabtidii waddamada Kyiv hubka ka caawiya ugu baaqay iney ka labalabeyn iney Ukraine gacanta u soo geliyaan nidaamka gantaalaha ee MLRS.
Tani ma aha marki ugu horreysay oo mas’uul sare oo ka tirsan dowladda Ukraine uu waddamada reer galbeedka uu u soo jeediyo codsi iyo dhaleeceyn ku aaddan sababta ay hubkaasi Kyiv u siin la’yihiin.
Maalin ka hor, madaxa madaxtooyada Andriy Yermak wuxuu ka hadlay baahida hubkan ay Ukraine u qabto. Wuxuuna yiri: “Ukraine in la siiyo nidaamka gantaalaha M142 HIMARS iyo M270 MLRS waa muhiim.”
Nidaamkan ay Ukraine sida weyn ugu heellantahay ayaa ah mid u suuragelinayo iney ka hortagto weerarrada Ruushka.
Todobaadkan, wargeyska Politico ayaa soo warisay, iyadoo soo xiganeysa ilo wareedyo ku dhow maamulka Biden inuusan ku degdegin inuu Ukraine hub badan siiyo, hubkaasi oo ay ku jiraan gantaalaha riddada dheer.
Wargeyska waxaa kale uu sheegay Mareykanka inuu ka cabsi qabo Ukraine iney hubkaasi u isticmaasho weerarro ay ku qaaddo Ruushka taasina ay keeni karto dagaalka oo sii adkaado.
“Filashada Ukraine” oo aad u sarreyso
21-kii Bishan May madaxweyne Zelenesky wuxuu ka hadlay nidaamka MLRS.
“Waxaan si daacadnimo ku jirto u leeyahay filashadayadu aad bey u sarreysaa, muddo dheerna waan sugeynay…waxaanna rajeynayaa jawaab celin wanaagsan oo noo suurageliso helitaanka hubka MLRS,” ayuu yiri xilli ay Kyiv shir jaraa’id ku qabanayeen isaga iyo Ra’isul wasaaraha Portuguese Antonio Costa.
Nidaamkaasi mahad ha gaadho, “Ukraine wuxuu u suuragelinayaa iney qaaddo tallaabbo ay dalkeeda ku xoreyneyso.”
Wuxuuna ku nuuxnuuxsaday: “Kyiv waxay taageeradan u dalbaneysaa sababo la xiriiro maadaamaa aan xamili karin tobannaanka, boqollaalka iyo kumannaanka qof ee dhimanaya.”
“Xaalku ma aha inuu sidan sii ahaado”
Maalin ka hor madaxa xaruunta madaxtooyada Andriy Yermak wuxuu sheegay dalkooda inuu ‘hub culus’ uu u baahan yahay.
“Gaar ahaanna waxaa muhiim noo ah oo aan weli sugeynaa hubka MLRS. Welina shacab badan ayaa hubkaasi sugaya.” ayuu yiri.
Nidaamka gantaalaha kala duwan laga gano M270 MLRS wuxuu awood u leeyahay in laga tuurp gantaala socon kara masaafa gaareyso 45km, 70km ilaa iyo 300 km.
Si la mid ah nidaamka gantaalaha M142 HIMRS, M270 MLRS waxaa sida oo kale loo isticmaali karaa arrimo gaar ah.
Haddii aad dooneyso masaafo aad u fog inaad bartilmaamed gaar ah ka beegsato, nidaamkna wuxuu ka ciyaarayaa door muhiim ah wuxuuna ciidamada siinayaa awood buuxda oo ay ku weeraraan bartilmaameedka ay doonaan.
Warbaahinta Ruushkana waxay walaac xooggan ka muujiyeen hubkaas in Ukraine gacanta uu u soo galo. Waxayna aaminsan yihiin haddii ay ciidamada Ukraine hubka ay reer galbedka ka rajeynayaan helaan ay u fududaaneyso iney si fudud u soo tallaabaan xadka Ruushka.
Nidaamka HIMARS ee ay ciidamada Ukraine aadka u daneynayaan haddii uu gacantooda soo galo waxay awood u siineysaa iney si fudud u qarxiyaan gantaalaha noocoodu yahay ATACMS ee Ruushka.
Haddii ay Ciidmada Ukraine helaan hubkan waxay yeelan doonaan ‘Awood ciidan’ oo aad u sarreysa gaar ahaanna awooddooda dhanka gantaalaha, halka uu Ruushkana weerarrada gantaalaha uu u adeegsado nidaamka gantaalaha “Dots-U’ masaafo gaareysa 120 km.
Previous articleOlena Zelenska: Xaaska madaxweynaha Ukraine oo shaacisay wixii ninkeeda kala qabsaday subixii dagaalka
Next articleXasan Sayyad Khodayi: Saddex arrimood oo ku saabsan sarkaal sare oo lagu dilay Tehran
Daawo: Darbaweyne oo digniin u diray Xasan Sheekh, weerarna ku qaaday...
Sawirkii ugu horreeyay abid oo laga qaaday mucjisada godka madow ee...